Efa nanangana mari-pahaizana amin'ny webmaster ve ianao? | Martech Zone
Efa nanangana mari-pahaizana amin'ny webmaster ve ianao?
Zoma, Septambra 24, 2010 Alatsinainy Oktobra 20, 2014 Douglas Karr
Tamin'ity herinandro ity dia nandinika ireo tranokalan'ny mpanjifa mampiasa fitaovana webmaster aho. Ny iray amin'ireo hafahafa notondroiny dia ny ankamaroan'ny rohy anatiny amin'ilay tranokala manana kaody fampielezan-kevitra mifamatotra amin'izy ireo. Tena tsara ho an'ny mpanjifa izany, azon'izy ireo atao ny manara-maso ny antso-to-action (CTA) tsirairay azy ireo manerana ny tranokala. Tsy dia tsara loatra ho an'ny Search Engine Optimization anefa.
Ny olana dia tsy fantatr'i Google (ny motera fikarohana) ny kaody fampielezan-kevitra. Famantarana fotsiny ny adiresy mitovy amin'ny URL amin'ny URL samihafa. Ka raha manana CTA ao amin'ny tranokalaniko aho izay mifanakalo mandritra ny fotoana rehetra mba hizaha toetra sy hahitana izay misarika fiovam-po bebe kokoa dia mety hiafara amin'ny:
Tena pejy tokana izany, saingy mahita URL telo samihafa i Google. Zava-dehibe ny fampifandraisana anatiny ao amin'ny tranokalanao satria milaza amin'ny motera fikarohana izay atiny lehibe manandanja ao anatin'ny tranokalanao. Matetika, ny pejy an-tranonao sy ny rohy atiny 1 lavitra ny pejy misy anao dia mavesatra. Raha manana kaody fampielezan-kevitra marobe ampiasaina mandritra ny Google ianao, dia mahita rohy samihafa i Google ary, angamba, tsy mavesatra araka ny tokony ho izy.
Mety hitranga izany amin'ny rohy miditra avy amin'ny tranokala hafa koa. Ireo tranonkala toa ny Feedburner dia mampiditra kaody fampielezan-kevitra Google Analytics amin'ny rohinao. Ny rindranasa Twitter sasany dia manampy kaody fampielezan-kevitra (toa TwitterFeed rehefa alefa). Google dia manolotra vahaolana roa momba an'io.
Ny fomba iray dia ny fidirana amin'ny Google Search Console kaonty ary fantaro ny masontsivana izay azo ampiasaina ho kaody fanentanana. Fa Google Analytics, natsangana toy izao:
Ny pejy dia hilaza aminao izay masontsivana hitany eo amin'ny tranokalanao, noho izany dia mora ny mamantatra raha misy fiantraikany aminao izany na tsia. Google milaza:
Ny masontsivana mavitrika (ohatra, ny sesma fivoriana, loharano na fiteny) ao amin'ny URL-nao dia mety hiteraka URL maro samihafa izay manondro ny atiny mitovy ihany. Ohatra, http://www.example.com/dresses'sid=12395923 dia mety hanondro atiny mitovy amin'ny http://www.example.com/dresses. Azonao atao ny mamaritra raha tianao tsy hiraharaha ny mason-tsivana manokana hatramin'ny 15 ao amin'ny URL anao i Google. Izy io dia mety hiteraka mandady mahomby kokoa sy URL tsy misy mpamorona vitsy kokoa, sady manampy amin'ny fiantohana fa voatahiry ny vaovao ilainao. (Fanamarihana: Na dia mandray ny tolo-kevitra aza i Google, dia tsy manome toky izahay fa hanaraka azy ireo amin'ny tranga rehetra.)
Ny vahaolana fanampiny dia ny miantoka Rohy Canonical napetraka. Ho an'ny ankamaroan'ny rafi-pitantanana atiny dia banga izao. Raha tsy manana ny singa rohy kanônika ao amin'ny tranonkalanao ianao dia mifandraisa amin'ny mpamatsy CMS na webmaster anao hahitanao ny antony. Ity misy horonan-tsary fohy amin'ny rohy Canonical, izay eken'ny motera fikarohana lehibe rehetra ankehitriny.
Hamarino tsara fa samy manao azy roa - tsy afaka mitandrina ianao, ary ny dingana fanampiny dia tsy handratra na inona na inona!
Tags: google webmasterGoogle +fikarohana OptimizationSEOWebmaster
Indiana: Kapitalin'ny marketing an'izao tontolo izao
Ny tena antony hanakarama mpampianatra media sosialy